Baiboly pejy 50 - Ny Baiboly
Voalohany < 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Manaraka Farany
Eksaody toko 32 (tohiny)
14Dia nanenenan'ny Tompo ny ratsy nolazainy hafitsoka ny vahoakany.
30Nony ampitso, hoy Moizy tamin'ny vahoaka: Efa nahavita heloka bevava hianareo, ka ankehitriny ndeha hiakatra ho any amin'ny Tompo aho, fa angamba hahazo famelana ny fahotanareo aho. 31Dia niverina nankany amin'ny Tompo Moizy, ka nanao hoe: Indrisy, efa nahavita heloka bevava io vahoaka io, fa efa nanao andriamanitra volamena ho azy izy ireo. 32Ary ankehitriny avelao re ny helony; fa raha tsy izany, vonoy ny anarako ao amin'ny bokinao izay nosoratanao. 33Fa hoy Iaveh tamin'i Moizy: Izay nanota tamiko no hovonoiko anarana amin'ny bokiko. 34Fa hianao izao, mandehana mitarika ny vahoaka ho any amin'izay nolazaiko taminao. Indro fa handeha eo alohanao ny anjeliko, nefa amin'ny andro famangiako dia hofaiziko noho ny fahotany izy ireo. 35Nokapohin'ny Tompo ny vahoaka noho ny nanaovany ny zanak'omby izay nataon'i Aarona.
Eksaody toko 33
Andriamanitra namela heloka ny vahoakany noho ny fifonan'i Moizy.
1Ary hoy Iaveh tamin'i Moizy: Mandehana, miaingà avy eto, hianao sy ny vahoaka nentinao niakatra avy any amin'ny tany Ejipta, ho any amin'ny tany efa nampanantenaiko tamim-pianianana an'i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba nataoko hoe: Homeko ny taranakao io. 2Haniraka anjely eo alohanao aho, ary handroaka ny Kananeana, ny Amoreana, ny Heteana, ny Ferezeana, ny Heveana ary Jeboseana. 3Dia ho any amin'ny tany tondra-dronono aman-tantely, fa tsy hiakatra aho eo afovoanao, satria vahoaka mafy hatoka hianao, ka sao dia haringako eny an-dàlana eny.
4Nony nandre izany teny mafy izany ny vahoaka dia nisaona tsy nisy nitafy ny fihaingoany intsony. 5Ka hoy Iaveh tamin'i Moizy: Lazao amin'ny zanak'Israely hoe: Vahoaka mafy hatoka hianareo, ka raha miakatra aho eo afovoanareo, na dia indray mipi-maso aza, dia holevoniko hianareo, koa apetraho amin'izao ny fihaingoanareo, dia ho fantatro izay hataoko. 6Dia nesorin'ny zanak'Israely ny fihaingoany, hatreo an-tendrombohitra Horeba.
7Nalain'i Moizy ny trano lay, naoriny eo ivelan'ny toby, lavidavitra ihany, nataony hoe: ny trano lay fihaonana no anarany; ary na zovy na zovy nitady an'ny Tompo dia nankeo amin'ny trano lay fihaonana teo ivelan'ny toby. 8Nony injay miainga Moizy ho ao an-trano lay fihaonana, ny vahoaka rehetra kosa samy mitsangana eo am-baravaran'ny lay manara-maso an'i Moizy mandra-pidiny ao an-trano lay. 9Raha vao tafiditra ao an-day Moizy, ny andry rahona midina mijanona eo anoloan'ny trano lay, ary Iaveh miresaka amin'i Moizy. 10Mahita ny andry rahona mijanona eo anoloan'ny trano lay ny vahoaka, dia mitsangana ny vahoaka rehetra ary samy miankohoka eo am-baravaran'ny lainy avy. 11Ary Iaveh miresaka mifanatrika amin'i Moizy, mova tsy ny olona miresaka amin'ny sakaizany. Rahefa izany dia miverina mankany an-toby Moizy, fa Josoe zanak'i Nona, ilay zatovolahy mpanompony, tsy mba niala tao afovoan'ny trano lay.
12Ary hoy Moizy tamin'ny Tompo: Hianao milaza amiko hoe: Ento miakatra ity vahoaka ity, kanefa izay hirahinao hiaraka amiko mbola tsy lazainao amiko. Nilaza anefa hianao nanao hoe: Fantatro amin'ny anaranao hianao, efa nahita fitia teo imasoko hianao; 13koa ankehitriny raha nahita fitia teo imasonao tokoa àry aho dia mba hampahalalao ahy ny làlanao, ary aoka hahalala anao aho mba hahitako fitia eo imasonao. Hevero fa vahoakanao ity firenena ity; 14Dia hoy ny navalin'ny Tompo: Ny tavako no handeha hiaraka aminao, ary homeko fitsaharana hianao. 15Ka hoy Moizy: Raha tsy handeha ny tavanao dia aza mampiala anay eto. 16Fa inona moa no hahafantaran'ny olona fa nahita fitia teo imasonao aho sy ny vahoakanao, afa-tsy ny fandehananao miaraka aminay ihany? Izany no hanavaka anay, dia izaho sy ny vahoakanao, amin'ny vahoaka rehetra eto ambonin'ny tany.
17Dia hoy Iaveh tamin'i Moizy: Hataoko indray koa izao zavatra angatahinao izao, satria efa nahita fitia teo imasoko hianao, sady fantatro amin'ny anaranao hianao.
18Ary hoy Moizy: Mba ataovy mahita ny voninahitrao aho. Ka hoy ny navalin'ny Tompo: 19Hampandaloviko eo anatrehanao ny hatsaram-poko rehetra; ary hotononiko eo anatrehanao ny anaran'ny Tompo; fa mankasitraka izay ankasitrahako aho ary mamindra fo amin'izay amindrako fo. 20Dia hoy Iaveh: Tsy afa-mahita ny tavako hianao, satria tsy afa-mahita ahy ny olombelona ka mbola ho velona ihany. 21Hoy Iaveh: Indro misy fitoerana eto akaikiko, ka hijanona eo ambony vatolampy hianao; 22ary rahefa mandalo ny voninahitro, hataoko ao an-tsefatsefa-bato hianao, dia hosaronako amin'ny tànako mandra-pandaloko; 23izay vao hesoriko ny tànako, ka eo ivohoko no hahitanao ahy, fa ny tavako tsy hay jerena.
Eksaody toko 34
Voaorina indray ny fanekena - Ny vato fisaka roa nanoratana ny didy folo.
1Ary hoy Iaveh tamin'i Moizy: Manaova takelaka vato roa tahaka ireo voalohany ka hanoratako ny teny izay efa teo amin'ireo takelaka voalohany notorotoroinao. 2Aoka ho vonona ho amin'ny ampitso, dia hiakatra hianao raha vao maraina, ho any an-tendrombohitra Sinaia ka hijanona eo anatrehako ao an-tampon'ny tendrombohitra. 3Aoka tsy hisy olona hiara-miakatra aminao; ary aoka tsy hisy olona hiseho eny an-tendrombohitra Sinaia rehetra eny; ary na ny ondry mbamin'ny omby aza, aoka tsy hihinana eny akaikin'ny tendrombohitra eny akory. 4Dia nipaika takelaka vato roa tahaka ireo voalohany Moizy; ka nifoha maraina koa, niakatra ny tendrombohitra Sinaia, araka ny nandidian'ny Tompo azy; nentiny teny an-tànany ny takelaka vato roa.
5Dia nidina tao anatin'ny rahona Iaveh ka niara-nijanona taminy teo, sy nanonona ny anarana hoe: Iaveh!
Pejy: Voalohany < 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.2333 seconds